Sajhasabal.com |शुन्य लागतमा कतार जान चाहनेहरुको लागि भोलिदेखि ३ दिनसम्म अन्तर्वार्ता हुने, तलव ८० हजारसम्म
माघ १२, काठामाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा अनिवार्य रुपमा रकम तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको तपाई हामी सबैलाई थाहा भएकै विषय हो । यदि तपाइलाई कुनै म्यानपावर कम्पनीले नै शुन्य लागत हो भन्दा विश्वास पनि गर्नुहुन्न किनकी अहिलेसम्म नेपालबाट विदेश जाने भनेकै लाखौँ खर्च गरेर मात्र जान पाइन्छ भन्ने नै छ ।
अहिले विदेशका केहि कम्पनीले मात्र शुन्य लागतमा श्रमिक लिने गरेका छन् । नेपालमा एकै म्यानपावर कम्पनीले विदेशका विभिन्न कम्पनीमा श्रमिक पठाउँदा कुनै कम्पनीमा शुन्य लागतमा पठाउँछन् त कुनै कम्पनीमा शुल्क लिएर ।
हाल इन्टरनेशनल म्यानपावर रेक्रुटमेन्ट प्रा. लिले कतारको URban Hospitality Services को लागि ५२ जनाको डिमाण्ड ल्याएको छ । जुन कम्पनीमा जानको लागि नेपालमा कुनै पनि अतिरिक्त शुल्क तिर्नु नपर्ने म्यानपावर कम्पनीले जनाएको छ । वैदेशिक रोजगार काठामाडौं कार्यालय ताहाचलबाट २०७७ माघ ६ गते Gen Clean Worker(पुरुष ३५, महिला १५ जना) र Supervisor (२ जना पुरुष) को लागि पुर्व स्वीकृति लिएर विज्ञापन गरिएको छ । Gen Clean Worker को न्यूनतम मासिक तलब ३१ हजार ९८० र Supervisor को तलब ७९ हजार ९५० रहेको छ भने खान र बस्न अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्दन ।
वैदेशिक रोजगारीमा स्वच्छ भर्ना प्रक्रिया अवलम्बन गर्दै शुन्य लागतको अवधारणालाई व्यवहारमै लागू गरेर देखाउने प्रयासमा लागेको छ, इन्टरनेशनल म्यानपावर रेक्रुटमेन्ट प्रा. लि. । श्रमिकबाट नभई रोजगारदाताबाट नै म्यानपावर कम्पनीलाई सेवा शुल्क आउने भएकोले यो कम्पनीमा कतार जाँदा म्यानपावर कम्पनीलाई सेवा शुल्क तिर्नुपर्दैन । स्वदेशमा गरिने मेडिकल खर्च, म्यादी जीवन बीमा र अभिमुखीकरण तालीम बापतको शुल्क जाने श्रमिकले तिर्नुपर्नेछ यस बाहेक अन्य सबै खर्च रोजगारदाता कम्पनीले व्यहोर्ने म्यानपावर कम्पनीले जनाएको छ ।
माघ १३ ,१४ र १५ गते गते गते म्यानपावर कार्यालय ग्वाकोंमाअन्तर्वार्ता हुने कम्पनीले जनाएको छ। कोमिड-१९ को रोकथाम प्रकिया र सामाजिक दूरी कायम गरी श्रमिक छनौट अन्तर्वार्ता संचालन गरिने जनाइएको छ ।
अबैध भतीकर्ताहरूदेखि साबधान रहनुहोला । कृपया धोखाधदी, अबैध कियाकलाप वा भ्रष्टाचारको विरुद्ध आईएमआरको स्वतन्त्र तेस्रो पक्ष हटलाइन नं +९७७ १८०११३७७६५ वा [email protected]mail.com ईमेलमा रिपोर्ट गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । हामी तपाईको गोपनीयताको सुनिश्चित राख्नेछौं ।